माओवाद पार्टी विघटन प्रचण्डलाई बाबुरामको सुझाव – Karnalikhabar
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराइले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी विघटन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले नेपालमा अब माओवाद नचल्ने भएकाले यसको औचित्य समाप्त भएको बताउँदै माओवादी छाडेर पार्टी विघटनपछि पुनः सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन् ।
बिरामी भेट्न केहीदिन अघि निवास पुगेका प्रचण्डलाई पनि त्यही सुझाव दिएको भट्टराईले बताए ।
“माओवादी जनयुद्धप्रति मलाई गर्व नै छ,” सोमबार बेलुका केही पत्रकारमाझ भट्टराईले भने, “तर अब नेपालमा माओवादीको औचित्य सकियो । माओवादीको फौजीपाटोसम्म ठिकै थियो । त्यसले गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्यायो । अब त्यसको औचित्य छैन । राजनीतिक रुपमा पनि अब माओवाद बाँकी देखिँदैन । वहुदलीय प्रतिष्पर्धामा जाने अनि कसरी माओवाद ?”
प्रचण्डले माओवाद छाडेर पार्टी विघटन गरेमा नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन सकिने बताए ।
“अब तपाइँले माओवाद छाड्नुपर्छ भनेर भनेको छु,” भट्टराईले प्रचण्डलाई दिएको सुझाव स्मरण गर्दै भने, “तपाइँले अब माओवाद छाड्नुस्, यसको औचित्य पनि सकियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र विघटन गर्नुस् र नयाँ सम्बन्धले अघि बढौं ।”
भट्टराईले अहिले माओवादी केन्द्रमा जाने कुनै सम्भावना नै नरहेको बताए । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्ता हल्ला बेला बेला चलाउने गरेको पनि बताए ।
डा. भट्टराईले आफू संघीय चुनावमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाटै चुनाव लड्ने बताए । उनले अबको चुनावमा क्वाटर र सेमिफाइनलको यात्रा गर्ने बताउँदै अबको ४ वर्षपछि हुने चुनावमा निर्णायक शक्ति बन्ने दाबी गरे ।
“म गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ बाटै चुनाव लड्छु,” उनले भने, “अहिले हामी निर्णायक शक्ति हुँदैनौं । तर सम्मानजनक उपस्थिति हुनेछ । अहिले क्वाटर र सेमिफाइनलमा पुग्छौं । अर्कोपटक निर्णायक शक्ति भएर फाइनलमा प्रतिष्पर्धा गर्छौं ।”
डा. भट्टराईले आफूपछिको दोस्रो तहको नेता को हुने भन्ने विवाद भएका कारण देवेन्द्र पौडेल र रामचन्द्र झा बाहिरिएको खुलासा गरे । “उहाँहरु को २ नम्बरमा भन्ने झगडाकै कारण बाहिरिनुभएको हो,” उनले भने, “दुवैको झगडा त्यसकै लागि थियो तर दुवै जना रहनुभएन ।”
उनले अब परिवर्तन हुन नसक्ने व्यक्तिहरु बाहिरिएको बताए ।
“विरुवा हुर्कँदा पुरानो बोक्रो झर्छ, बच्चाको पनि सानोमा दाँत झरेर नयाँ आउँछ,” भट्टराईले उदाहरण दिँदै भने, “रुपान्तरित हुन नसक्ने व्यक्तिहरु बाहिरिएका हुन् । अब नयाँ शक्ति तीव्र गतिमा अघि बढ्न सहज पनि भएको छ ।”
डा. भट्टराईले भारतले कहिले पनि नेपालको विकास नचाहेको बताए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भारतले खाली आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिले मात्रै नेपाललाई हेरेको बताए ।
“हिमालको सेरोफेरो, सुरक्षाको घेरो भन्दामाथि भारत उठ्न सकेन । लगानी ल्याएर पनि नेपालमा प्रभाव बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भारतले बुझेन । भारतीय सत्तापक्षको बुझाइ सधैँ नेपालमा खेलेर आफ्नो शक्ति कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मात्रै भयो ।”
भारतको परनिर्भरताबाट मुक्त नभएसम्म नेपालको विकास हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो ।
अघिल्लो - खुल्यो उत्तर कोरियाका शासक किमको सनसनीपूर्ण रहस्य, यस्तो थियो उनको ‘थ्री इडियट्स’ स्टाइल
‘छक्का पन्जा २’ को ट्रेलर सार्वजनिक गर्न ज्योतिषले दिए यो समय - पछिल्लो